Mkpụrụ osisi Germination Tray Seed Tray Plastic China Manufacturer
Nkọwa:Ihe Nkpuru Ogwu Na-eme Ogwu.,Nkume Na-ekpo ọkụ Osisi,Kpoo akwa maka akwa pot
Home > Ngwaahịa > Ulo Okpokoro Ugbo > Ngwongwo ihe na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe > Mkpụrụ osisi Germination Tray Seed Tray Plastic
100x178mm Ngwongwo osisi na-ekpo ọkụ maka Fatịlaịza
Mkpụrụ Igwe Okpomọkụ Na-enye okpomọkụ na mkpụrụ osisi maka ịmị mkpụrụ na ngwa ngwa. N'ihi na nke kacha mma, anyị na-atụ aro mkpụrụ ịmalite tray na starter plọg na dome humidity.Nwepu wepu plọg site na tray mgbe a na - ahụkarị mgbọrọgwụ ọcha, nke na - adịkarị n'etiti 5 -14 ụbọchị mgbe germination. A pụrụ ịkụnye plọg gbanyesiri mkpọrọgwụ na mkpụrụ ọ bụla na-eto eto. Igha mkpụrụ osisi n'ụzọ dị otú a gbadoro oge germination na ọ bụ ụzọ dị mma isi mee ka osisi gị bụrụ mmalite.
akpụkpọ anụ ihe oyiyi nke 100 * 178mm
Mkpụrụ osisi na-agbasa mkpụrụ maka osisi na mkpụrụ Kpọtụrụ ugbu a
Ihe Nkpuru Ogwu Na-eme Ogwu. Nkume Na-ekpo ọkụ Osisi Kpoo akwa maka akwa pot Igwe Egwurugwu Na-agba Efu Egwuregwu Na-eme Ncha Igwe Ngwurugwu Greenhouse Ogwu Ogwu Ogwu Ogwu Okpokoro Ulo Ogwu Ogwu Ogwu